June 18, 2021 - ApannPyay Media
ခေါင်းအုံးမပါပဲအိပ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်အသားအရေဆိုင်ရာကောင်းကျိုး ၅ မျိုး
June 18, 2021 by ApannPyay Media
ခေါင်းအုံးမပါပဲအိပ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်အသားအရေဆိုင်ရာကောင်းကျိုး ၅ မျိုး လူတိုင်းကတော့ အိပ်ပြီဆိုရင် ခေါင်းအုံးနဲ့ အိပ်ကြတာပဲများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ပါပဲ။ ခေါင်းအုံးမပါပဲအိပ်ခြင်းကြောင့် သင့်အသားအရေအတွက် ဒီလိုကောင်းကျိုး ၅ မျိုး ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ 1=အရေးအကြောင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းလျော့ကျစေတယ် ခေါင်းအုံးအသားတွေက cotton နဲ့လုပ်ထားကြတာများပါတယ်။ အဲ့ဒီခေါင်းအုံးနဲ့အိပ်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာကိုပွတ်မိသလို ဖြစ်စေလို့ အရေးအကြောင်းတွေ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အဖြစ်မြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းအုံးနဲ့မအိပ်ရင်တော့ အရေးအကြောင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ကျလာစေပါမယ်။ 2=အသားအရေချောမွေ့စေတယ် ခေါင်းအုံးနဲ့မအိပ်တာကြာရင် အသားအရေက ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ချောမွေ့လာစေပါတယ်။ ခေါင်းအုံးနဲ့အိပ်တာနဲ့ ခေါင်းအုံးမပါပဲအိပ်တာကို အချိန်ကြာစောင့်ကြည့်ပြီး ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သိသာတဲ့ result ကို တွေ့ရမှာပါ။ 3=Skin irritation မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ကိုယ့်အသားအရေက sensitive ဖြစ်တယ်၊ acne-prone skin ဖြစ်တယ်ဆိုရင် cotton နဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို မသုံးတာ … Read more
အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်း ၄ မျိုးနဲ့ မျက်ခုံးမွှေးထူလာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း ၄ မျိုး
အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်း ၄ မျိုးနဲ့ မျက်ခုံးမွှေးထူလာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း ၄ မျိုး မျက်ခုံးမွှေးထူချင်တဲ့သူတွေနဲ့ မျက်ခုံးမွှေးမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်း ၄ မျိုးနဲ့ မျက်ခုံးမွှေးထူလာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း ၄ မျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ကိုယ်အဆင်ပြေရာတစ်မျိုးကိုရွေးပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာစွဲလုပ်ပေးရင်တော့ အချိန်ကြာရင် သိသာတဲ့ရလဒ်ကို ရရှိလာမှာပါ။ စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့ ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အုန်းဆီ အုန်းဆီမှာက vitamin E အပြည့်အဝပါဝင်လို့ hair တွေသန်စွမ်းဖို့ အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် မျက်ခုံးမွှေးကို အုန်းဆီလိမ်းပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ မျက်ခုံးမွှေးက တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ထူလာပါလိမ့်မယ်။ သံလွင်ဆီ သံလွင်ဆီမှာက vitamin E နဲ့ Vitamin A များစွာပါဝင်လို့ hair တွေသန်စွမ်းစေဖို့ အထောက်အကူပိုဖြစ်စေပါတယ်။ … Read more
အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကြားရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲ ? အိမ်မြှောက် စုတ်ထိုးနိမိတ်
အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကြားရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲ ? အိမ်မြှောက် စုတ်ထိုးနိမိတ် အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ကတော့ နေ့တိုင်းလိုလို စုတ်ထိုးခြင်လည်း ထိုးမယ်် တခါတလေမှ ထိုးခြင်မှလည်းထိုးမယ်အဓိက က အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကို ကြားရသူ အတွက်နိမိတ်စကားလေးတွေကို ရှေးဆရာကြီး များက ဒီလိုအဟောလေးတွေ ထုတ်ထား ခဲ့ပါတယ် (၁) အရှေ့က စုတ်ထိုးသံကြားရင် သူတစ်ပါးရဲ့ အပူဇော်ကို ခံရတတ်ပါတယ် (၂) အရှေ့တောင်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင်မိီးလောင်တတ်တယ် ၊ ခန္ဓာကို်အပူလောင် တတ်တယ် ရန်ပေါ် ရတတ်တယ် (၃) တောင်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင် အစားအသောက်ကောင်းများ စားရတတ်တယ် (၄) အနောက်တောင်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင်အချုပ်အနှောင်ခံ ရတတ်တယ် ၊ (၅)အနောက်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင်ချစ်သူရတက်တယ်၊ အိမ်ထောင်ကျ တတ်တယ် (၆) အနောက်မြောက်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင်လာဘ်လာဘဝင် တတ်တယ် ၊ ငွေရွှင် တတ်တယ် … Read more
ဆံသားပျော့ပျောင်းတောက်ပစေဖို့ ထောပတ်သီးကိုသုံးပြီး Chemical လုံးဝမပါတဲ့ Hair Conditioner ပြုလုပ်နည်း
ဆံသားပျော့ပျောင်းတောက်ပစေဖို့ ထောပတ်သီးကိုသုံးပြီး Chemical လုံးဝမပါတဲ့ Hair Conditioner ပြုလုပ်နည်း ခေါင်းလျှော်ပြီဆိုရင် တော်တော်များများလည်း Conditioner ကိုသုံးကြမှာပါ။ Chemical လုံးဝမပါတဲ့ Conditioner ကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်မှပဲရမှာပါ။ဒါကြောင့် ထောပတ်သီးကိုသုံးပြီး Chemical လုံးဝမပါတဲ့ Hair Conditioner ပြုလုပ်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးက ဆံသားကိုပျော့ပျောင်းပြီး ဆံသားတောက်ပစေပါတယ်။ ဒီ Hair Conditioner ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ ထောပတ်သီး – ၁ ခြမ်း၊ အုန်းဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း လိုပါတယ်။ လုပ်ရမယ့်ပုံစံကတော့ ထောပတ်သီး တစ်ခြမ်းကို အခွံခွာပြီး Blender ထဲထည့်မွှေပါ။ ထောပတ်သီးကျေညက်သွားတာနဲ့ အုန်းဆီ … Read more
မျက်နှာ အသားအရေအတွက် ပန်းသီး
မျက်နှာ အသားအရေအတွက် ပန်းသီး မျက်နှာပေါ်တွင် ဖြစ်နေတဲ့ အရေးအကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင် ရုံသာမက မျက်နှာအသား အရေကိုပါ ဖြူဝင်းပြီး တောက်ပြောင်လာအောင် ပန်သီးက ပြုလုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ် မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ပန်းသီးခြမ်းဖြင့် မျက်နှာကိုပွတ်ပေးပါက အရေးအကြောင်း ဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာအသားအရေကို ထိန်းသိမ်းကြသော အမျိုးသမီးများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းသီးကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားသုံးပါက ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေကိုလည်း လှပစေနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Credit : ကျော်လင်းနိုင် (ကျန်းမာရေးသတင်းများ) မ်က္ႏွာ အသားအေရအတြက္ ပန္းသီး မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ ႐ုံသာမက မ်က္ႏွာအသား အေရကိုပါ ျဖဴဝင္းၿပီး … Read more
လူတွေမသိသေးတဲ့ အာလူးရဲ့အသုံးဝင်ပုံများ ၁- သံချေးချွတ်နိုင်ခြင်း ဓါးတွေ ကတ်ကြေးတွေ သံကြေးစွန်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အာလုံးကိုသုံးပြီး သံကြေးတွေချွတ်နိုင်ပါတယ်။အာလူးကြီးတစ်ဝက်ဝက်ပါ။ ထို့နောက် ဘေပင်ပေါင်ဒါ နဲ့ ဆားကို ဆပ်ပြာရည်အနည်းငယ်နဲ့ရောထားပါ။ဒီပျော်ရည်ထဲကို အာလူးခြမ်းကို နှစ်ပြီး သံကြေးတက်နေတဲ့နေရာတွေကိုပွတ်တိုက်ပါ။ရေဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ သံကြေးတွေပြောင်စင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၂- အပူလောင်ခြင်းကိုကုသပေးနိုင်ခြင်း ဟင်းချက်ရင်းလက်အပူထိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အာလူးသုံးပြီးတော့ အပူလောင်ဒဏ်ရာကို သက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အာလူးကို အဝိုင်းလေးတွေလှီးပြီးတော့ ရေစင်အောင်ဆေးကာ အပူလောင်သွားတဲ့နေရာကို ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကပ်ထားပေးပါ။ပြန်ခွာလိုက်တဲ့အခါ သိသိသာသာ ဒဏ်ရာသက်သာသွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ၃- အစွန်းချွတ်နိုင်ခြင်း အစားအသောက် အစွန်းအထင်းတွေပေနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အာလူးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အာလုံးတစ်လုံးကိုတောက်တောက်စင်းပြီး ရေထဲမှာ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်လောက်စိမ်ထားပါ။ထို့နောက် ရေမြုပ်တစ်ခုကို အာလူ့းရည်ထဲဆွတ်ပြီး စွန်းနေတဲ့နေရာကိုပွတ်တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် အစွန်းအထင်းတွေပြောင်စင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၄- သားရေပစ္စည်းတွေကိုပြောင်လက်စေနိုင်ခြင်း သားရေဖိနပ်မျိုးတွေဟာ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအရောင်မှိုင်းလာတတ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာ အာလူးကိုထက်ခြမ်းလှီးပြီး အာလူးနဲ့ ဖိနပ်ကိုပွတ်ပေးပါ။ထို့နောက် … Read more
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားကပြောပြပေးမယ့် သင်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်
နေလောင်ဒဏ်ရာတွေ၊ အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအတွက် ရှားစောင်းလက်ပတ်
နေလောင်ဒဏ်ရာတွေ၊ အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအတွက် ရှားစောင်းလက်ပတ် ရှားစောင်းလက်ပတ်က နေလောင်ဒဏ်ရာတွေ၊ အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်က အရေပြားကို အေးမြစေပြီး တစ်ရှူးအသစ်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ Antioxidants တွေလည်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပျားရည် ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပျားရည်က နေလောင်ဒဏ်ရာတွေ၊ ရောင်ရမ်းမှုတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပျားရည် ၁ခွက်ရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ရှားစောင်းလက်ပတ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို ရောပြီး ဒီဆေးကို နေလောင်ဒဏ်ရာပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်သွားမှ ရေဆေးချပါ။ နေ့တိုင်းလိုလို လိမ်းပေးပါ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ နနွင်း နနွင်းကလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေကို … Read more
လက်ကြားယိုသူတွေအတွက် လက္ခဏာ ဗေဒင်အဟော လက္ခဏာပညာ ကျမ်းစာအုပ်တွေ ဖတ်ဖူးသူ၊ ကြားဖူးနားဝ ရှိသူဆိုရင် လက်ကြားယိုတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ လက်ဖဝါးကို စေ့လိုက်လို့မှ လက်ချောင်းလေးတွေ ပူးကပ်မနေဘဲ လက်ချောင်းတွေကြားမှာ လက်ကြားယိုတာ၊ တနည်း ပြောရရင် လက်ချောင်းတွေကြားမှာ ကွာဟနေသူတွေကို “ငွေမမြဲသူ၊ အသုံးအဖြုန်းကြမ်းသူတွေ” အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အခုပဲ ခင်ဗျားတို့ လက်ဖဝါးကို သက်တောင့်သက်သာလေး ဖြေလျှော့ပြီးတော့ လက်ချောင်းလေးတွေကို စုစည်းကြည့်ပါ။ လက်ချောင်းတွေကြားမှာ လက်ကြားယိုနေတာတွေ ရှိသလား၊ လက်ကြားမယိုဘဲ လက်ကြားလေးတွေ စေ့နေသလား ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ပါ ဟောချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားလက်ဖဝါးကြားမှာ ဘယ်လို ယိုပေါက်မှ မရှိဘဲ လက်ချောင်းတွေအချင်းချင်း ပူးကပ်နေမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ စေ့စပ် သေချာသူ၊ လက်တွေ့သမား၊ … Read more